Haddii aynu nahay inuu magacaabo hal wax oo noqday arrin Ra'iisul ee guusha telefoonada smart, waxaa shaki la'aan wuxuu noqon doonaa awoodda ay u leeyihiin in ay ku xidhmaan user la internetka on go ah. Ma aha oo kaliya telefoonada smart ka dhigay isku xirnaanta fudud ay sidoo kale dhameeya users heshiis weyn ka eegay Internet-ka iyo website-yada Author ay jecel yihiin meel kasta oo ay yihiin. Haddii si kastaba ha ahaatee, aad la wadaagto telefoonka ah android ama waa fudud miyir qof socday taariikhda dhirta aad aad u baahan doontaa in ay nadiifiso xogta dhirta aad hadda kasta oo markaas.
Si lagaaga caawiyo in aad loo gaaro yoolkaas, article soo socda waxaad ka qaadataa iyada oo faahfaahsan, tallaabo hagitaan talaabo talaabo ah oo ku saabsan ka saareen taariikhda dhirta ka daalacashada internetka kala duwan oo kala duwan. Just raac tallaabooyinka loogu hadba browser aad isticmaasho oo aad noqon doonaa wanaagsan si ay u tagaan.
Ka Google Chrome la baneeyo Browsing History u Android
Haddii aad isticmaasho Mozilla Firefox qalabka android aad si wax loogu qabto baahida dhirta oo dhan iyo u baahan tahay in meesha laga saaro taariikhda ay dhirta, raac tallaabooyinkan:
1. Daahfurka Mozilla Firefox qalabka android iyo furto menu by siyoodba badhanka iyadoo seddex dhibcood waxa ku yaalaa xaq sare ee shaashadda.
2. Tag "Privacy iyo Amniga" ka menu soo socda oo u muuqata iyo dooro "Clear Private Data". Menu kale furi doonaa fursado la xiriira ansixinta xogta si. Dooro kuwa ku haboon baahidaada iyo tubbada "Clear Data".
3. Meel badhanka calaamadsan "Tirtir xogta" oo ka jaftaa.
4. menu pop-up A muuqan doonaa fursadaha ka mid ah waxyaabaha aad dooran karto in ay tirtirto ama sii. Calaamadee sanduuqyada ka dhanka ah waxyaabaha la doonayo iyo ka jaftaa "Clear". Haddii si kastaba ha ahaatee, waxaan idiin bedelay maskaxdaada tuubada "Cancel" oo aad si nabad ah ku noqon karaa.
5. kale menu pop-up idiin muuqan doonaa ogaysiinaya in hannaanka ansixinta taariikhda socda.
Ka Mozilla Firefox la baneeyo Browsing History u Android
Si aad taariikhda Author ka Opera qalabka android aad, sii wadi sida hoos ku faray:
1. Daahfurka Opera browser qalabka Android aad. Tubada O button oo cowsku hoos u arrow xaq u socota, waxa uu. Laga soo bilaabo hoos u soo dhaadhacay menu in furay, dooro "Settings" oo taga si "Privacy". Menu A muuqan doonaa fursadaha kala duwan oo la xidhiidha nadiifinta xogta daalacanaya. Dooro dhamaan ama qaar ka mid ah mid ka mid ah, oo ku salaysan aad looga baahan yahay.
2. screen A muuqan doonaa. Dul "Advanced" oo xulo "Privacy".
Ka Opera la baneeyo Browsing History u Android
La baneeyo taariikhda Author ka Chrome u Android waa laablaab laheyn. Si fudud u raac talaabooyinka hoos ku xusan:
1. Launch browser Google Chrome qalabka android iyo tubbada button ee dhinaca kore ee midig ee shaashada leh saddex dhibcood ku yaal. Laga soo bilaabo hoos u soo dhaadhacay menu, dooro "History".
Ka hoomboro la baneeyo Browsing History u Android
2. Laga menu pop-up muuqata, dooro nooca xogta in aad rabto in aad ka saarto soco garaacida ah "Exit" button. Haddii aad ku talo jirto in inta badan sameeyo, si fudud u dooro "Ha mar kale i weydiiso" doorasho iyo sidoo hor cadaadinaya hartay. Waxaa si toos ah u xusuusan doonaa doorashada si mustaqbalka loo adeegsado.
La baneeyo Stock Browser History on Android
Dadka qaba telefoonada android isagoo 4.0 android ama hore yeelan doonaa browser ee loo dhisay stock ku tilmaamay sida internet. Si ka stock browser this cadeeyo taariikhda, raac tilmaamaha soo socda:
1. Tag menu idinkoo ah loo siiyaa biraawsarkaaga iyo dhibic ka hoos menu in furay, dooro "Settings". Markaa waa inaad aadaa "Settings Privacy" ka screen soo socda in la furo ilaa fursadaha ansixinta taariikhda.
2. Sida aad u baahan tahay, dooro mid ka mid ah ama dhammaan xulashooyinka la siiyaa mid mid ay nadiifiso xogta Author ka stock biraawsarkaaga qalabka android aad.
La baneeyo Search History on Android
Si aad taariikhda raadinta, widget abuurtaan google search iyo sii wado sida hoos ku faray:
1. Tubada badhanka la saddex geeska bidix ee kore ee shaashada midig ka dambeeya logo Google ka calaamadeeyay.
2. Laga menu slider in furay, dooro "Settings" ayuu. Screen A furi doonaa fursado badan oo kala duwan waxa ay ku. Tag "Xisaabaadka iyo Privacy".
3. Waxaad tagtaa "" Google Account History "ka screen soo socda ka dibna dooro" Waxqabadka Web & App "ka shaashadda soo socda.
4. screen kale furi doonaa. Tag hoose ee shaashadda si ay u helaan "Maamul Waxqabadka" button oo guji ku yaal.
5. Tubada marsho ku qaabeeya icon yaal dhinaca midigta hoose ee shaashadda. Waxaa furi doonaa menu ah sida "History" magacaabay. Dooro "saar waxyaabaha".
6. Dooro waxyaabaha in aad rabto in aad sii ku saleysan mudada taas oo ay u adeegeen. Si aad u tirtirto oo dhan ee aad fudud raadinta taariikhda dooro "tan iyo bilowgii waqtiga" iyo tubbada "saar" button.
> Resource > Clean-up > Sida loo Cad History ka Android Phones